PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-10 - U-HUNT USEKHATHELE YINDUKU KA-MCCARTHY
U-HUNT USEKHATHELE YINDUKU KA-MCCARTHY
Ilanga langeSonto - 2017-09-10 - Ezemidlalo - SENZO SOKHELA
UMQEQESHI webidvest Wits ugavin Hunt uzwakalise ukuthi usekhathele wukunenebulwa ngenduku ngubenni Mccarthy ololonga icape Town City.
Iwits izodudulana necity emlenzeni wesibili we-semi-final YEMTN8 namuhla ngesonto ngo-15h00 ebidvest Stadium, egoli. Emlenzeni wokuqala icity iguqise iwits ngo-1-0 ecape Town Stadium emasontweni ambalwa edlule. Lo mdlalo unguwafa wafa njengoba kufanele kube khona ikilabhu edlulela kowamanqamu walo mqhudelwano ophethe isigaxa sika-r8 million.
Uhunt uthi usekhathele yinduku kamcCarthy, uthi noma kanjani kulokhu izotholwa nguyena.
“Umccarthy ngambona esemncane ukuthi ikhono lokuqeqesha unalo. Indlela abekulangazelele ngayo ukufunda into entsha ibingimangalisa. Kangithuki uma eliqala ngalolu hlobo ikusasa lakhe ekuqeqesheni. Phela uncele ulwazi kubaqeqeshi abehlukene futhi abaseqophelweni eliphezulu njengojose Mourinho omcije kwifc Porto.
“Kodwa-ke sesikhathele manje wukulokhu sibulawa nguyena ngenduku, kulokhu nje ufike ekugcineni. Sizokwenza ngawo wonke amandla ukuwunqoba lo mdlalo ngoba sifuna ukusivikela isicoco sethu. Kasizimisele ukuthi sisiphunyuke kalula nje,” kusho uhunt.
Umccarthy uthi babhekene nomdlalo onzima njengoba belokhu beyitalabhile iwits selokhu beqale ukudlala nayo.
“Sibhekene nenkulu ingcindezi manje. Siyazi ukuthi iwits ngeke ivume ukuthi silokhu siyehlula njalo.
"Kodwa-ke siyakwazi okufanele sikwenze, kasinalo uvalo ngayo. Ngikholwa wukuthi yiyona enengcindezi thina nje kasinayo nakancane,” kusho umccarthy ozakhele udumo ngesikhathi esengumgadli ongalibheki ipali kuleli naphesheya kwezilwandle.
NGUTHEMBELA Sikhakhane ongumdlali wasemuva wamazulu FC.